Ndị Izrel katọrọ Mosis maka na mmiri adịghị na Horeb (1-4)
Mmiri si n’oké nkume gbapụta (5-7)
Ndị Amalek lụsoro ndị Izrel agha, e merie ha (8-16)
17 Nzukọ Izrel niile si n’ala ịkpa Sin pụọ.+ Ọ na-abụ ha si otu ebe kwalie, ha agaa n’ebe ọzọ, otú Jehova nyere ha n’iwu.+ Ha wee maa ụlọikwuu na Refidim.+ Ma mmiri ha ga-aṅụ adịghị. 2 Ndị Izrel wee malite isesa Mosis okwu,+ sị: “Nye anyị mmiri ka anyị ṅụọ.” Ma Mosis sịrị ha: “Gịnị mere unu ji na-esesa m okwu? Gịnị mere unu ji na-anwa Jehova ọnwụnwa?”+ 3 Ma agụụ mmiri nọ na-agụsi ha ike n’ebe ahụ. Ha nọkwa na-akatọ* Mosis,+ sị: “Gịnị mere i ji kpọpụta anyị n’Ijipt ka agụụ mmiri gụgbuo anyị na ụmụ anyị na anụ ụlọ anyị?” 4 N’ikpeazụ, Mosis rịọrọ Jehova, sị: “Gịnị ka m ga-eme ndị a? Obere oge ugbu a, ha ga-atụ m nkume.” 5 Jehova wee sị Mosis: “Kpọrọ ụfọdụ ndị okenye Izrel ka gị na ha gafete n’ihu ndị Izrel, werekwa mkpara gị nke ị kụrụ n’Osimiri Naịl.+ Jiri ya n’aka gawa. 6 Lee, m ga-eguzo n’ihu gị n’ebe ahụ n’oké nkume dị na Horeb. Ị ga-akụ mkpara n’oké nkume ahụ. Mmiri ga-esi na ya gbapụtara ndị a, ha ga-aṅụkwa ya.”+ Mosis mere ihe a n’ihu ndị okenye Izrel. 7 O wee kpọọ ebe ahụ Masa*+ nakwa Meriba*+ n’ihi okwu ndị Izrel sesara Mosis nakwa n’ihi na ha nwara Jehova ọnwụnwa,+ sị: “Jehova ọ̀ nọnyeere anyị, ka ọ̀ bụ na ọ nọnyereghị anyị?” 8 Ndị Amalek+ bịara lụso ndị Izrel agha na Refidim.+ 9 Mosis wee gwa Joshụa, sị:+ “Họrọ ụmụ nwoke ụfọdụ gaa lụso ndị Amalek agha. Echi, m ga-eji mkpara ezi Chineke n’aka m guzoro n’elu ugwu.” 10 Joshụa mere nnọọ ihe Mosis gwara ya+ ma lụso ndị Amalek agha. Mosis, Erọn, na Họọ+ gbagokwara n’elu ugwu. 11 Ọ na-abụ Mosis welie aka ya, ndị Izrel emeriwe. Ma ozugbo o weturu aka ya, ndị Amalek emeriwe. 12 Mgbe aka Mosis nyịwara ya arọ, ha buteere ya nkume, ya anọrọ ọdụ na ya. Erọn na Họọ wee jide ya aka n’aka ya abụọ. Otu onye jidere ya n’otu aka, onye nke ọzọ ejide ya n’aka nke ọzọ, nke mere ka aka ya abụọ dịrị n’elu ruo mgbe anyanwụ dara. 13 Joshụa si otú a merie ndị Amalek na ndị so ha.+ 14 Jehova gwaziri Mosis, sị: “Dee ihe a n’akwụkwọ ka e wee na-echeta ya, kwughachikwa ya ka Joshụa nụ ya, ‘M ga-ehichapụ ihe niile e nwere ike iji cheta Amalek n’ụwa.’”*+ 15 Mosis wee rụọ ebe ịchụàjà ma kpọọ ya Jehova-nisi,* 16 sị: “Ebe ọ bụ na aka ndị Amalek na-emegide ocheeze Jaa,+ Jehova ga-alụso ha agha n’ọgbọ ha niile.”+
^ Masa pụtara “Ọnwụnwa.”
^ Meriba pụtara “Esemokwu.”
^ Jehova-nisi pụtara “Jehova Bụ Osisi Mgbaàmà M.”